Akụkọ - Kpọkọta usoro ọrụ na nlezianya nke igwe achicha mgbawa
Shavings nke metal bụ ụdị ihe mkpofu ewepụtara mgbe nhazi nke ngwaahịa ma ọ bụ akụkụ ọla. Ọ bụ akụrụngwa maka imepụta nchara dị elu. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka igwe igwe na-acha igwe na-eme ka ọ sie ike. N'ihi na ọtụtụ ndị amaghị usoro ọrụ nke akụrụngwa, ọrụ na ojiji A ga-enwe mmejọ na nsogbu dị iche iche na usoro ahụ. N'okpuru anyị ga - eduga gị ịghọta: usoro ọrụ na nlezianya nke igwe achicha mgbawa.
1. Akụrụngwa workflow
Usoro ịpị mpempe akwụkwọ n'ime achịcha bụ usoro nke ịpị aka na ntanye. N'oge usoro extrusion, ọ dịghị mkpa ikpo ọkụ ma ọ bụ tinye ihe nrachi. Ọ dị mkpa ịhọrọ ihe nkwado dị mkpa dịka nha na ọdịdị nke mpempe ọla. Ọ bụrụ na iberibe ihe ọla ahụ bụ irighiri oke nha, enwere ike ịbịnye mpempe akwụkwọ ahụ n'ime hopper nke igwe achicha achicha site na onye ebu ahụ, a na-edozigharị ihe mpempe akwụkwọ ahụ site na usoro nri. akwa njupụta achicha site na otu silinda na - akpụ, wee mezie ngọngọ achicha ahụ site na silinda ahụ ma wepu ya na akụrụngwa ahụ.
Ọ bụrụ na shavings ígwè ahụ dị ogologo ma ọ bụ buru ibu, ọ dị mkpa ịgafe igwe akụ ahụ ka ọ gbanye shavings metal n'ime irighiri irighiri irighiri ihe, wee pịa ha n'ụdị dịka usoro ndị a dị n'elu. Ebe ọ bụ na a na-atụfuchasị iberibe ọla dị iche iche, ọ dị mfe ikesa n'ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ ma ọ bụ gbochie ebu ahụ n'oge usoro nkesa. Anyị nwere ike ịwụnye ihe eji amanye ndị na-ebugharị ihe na igwe ihe igwe achicha, nke nwere ike melite arụmọrụ na akụrụngwa.
2. Nlekọta maka ọrụ akụrụngwa
1. Metal shavings nke dị iche iche ihe na akara ule kwesịrị-enwe iche iche. Agaghị agwakọta ha ọnụ. Nke a ga - eme ọ bụghị naanị melite ogo achịcha guzobere, kamakwa ọ na - abawanye ndụ ọrụ nke akụrụngwa;
2. A ga-ekpochasị ihe ndị e ji ígwè rụọ tupu ịpị, karịsịa ájá, veils, wdg. Agwaghị agwakọta ya na ígwè;
3. N'ihe banyere iberibe igwe nke nwere mmanụ, a ga-ehichapụ ma kpochapụ mmanụ mkpofu iji zere inwe mmetụta nke achicha guzobere;
4. Ekwesịrị ịhọrọ nrụgide dị iche iche maka igwe igwe mgbawa igwe iji gbochie ibe ọla dị iche iche. Mgbe ị na-agbanwe nrụgide ahụ, a ga-edozi ya dịka ihe ndị nrụpụta chọrọ si dị, enweghị ike ịhazi ya na uche ya;
5. N'ime usoro ọrụ nke igwe achicha achicha achicha, kwesiri itinye uche n'oge obula. Ma akụrụngwa ahụ nwere mmanụ mmanụ ma ọ bụ nrụgide na-adịghị agbanwe agbanwe, ekwesịrị iweghachi ya n'oge iji zere mgbasawanye nke mmejọ ahụ.
Tupu ịzụta ma ọ bụ na-amị, ị kwesịrị ị na-maara na ịghọta na ịmụta ọrụ usoro na-akpachara anya nke metal chipping igwe. Mgbe ị na-arụ ọrụ akụrụngwa n'ụzọ ziri ezi, ị kwesịrị ị na-a attentiona ntị na ọrụ nke akụrụngwa. A ga-enwerịrị usoro nhazi oge maka ọtụtụ ọnọdụ ndị na-adịghị mma.
Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Metal Powder Briquette Machine, Ọla kọpa Scrap Baler, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Agụba Shear Maka Mobile Digger,